Isityhilelo 18 - Holy Bible [Xhosa Bible 1975]
Sadanduluka ngamandla, ngezwi elikhulu, sisithi: Iwile,iwile iBhabheli enkulu, Yaba likhaya leedemon, nentolongo yoomoya bonke abangcolileyo, Nentolongo yeentaka zonke ezingcolileyo, ezithiyekileyo.
Ngokuba zonke iintlanga zisele kuyo iwayini yomsindo wobuhenyu bayo, Nookumkani bomhlaba bahenyuza nayo, Nabarhwebi bomhlaba baba zizityebi, ngamandla okuxhamla kwabo iziyolo zayo.
Ndeva elinye izwi liphuma emazulwini lisithi: Phumani kuyo,bantu bam, Ukuze ningadlelani nayo ngezono zayo, Nokuze ningamkeliswa kwizibetho zayo.
Ngokuba izono zayo ziye zafikelela emazulwini, Nezinto zayo zokungalungisi uzikhumbule uThixo.
Yibuyekezeni, njengoko nayo yanibuyekezayo, Niyiphinde impinda ngokwemisebenzi yayo; Indebe eyaniphithikezela yona,yiphithikezeleni impinda nani.
Yinikeni intuthumbo nesijwili, ngangoko yazizukisayo,yaxhamla iziyolo. Ngokuba ithi entliziyweni yayo, Ndihleli ndingukumkanikazi, Andimhlolokazi, andisayi kubona sijwili.
Ngenxa yoko ziya kufika ngamini-nye izibetho zayo, Ukufa,nesijwili, nendlala. Iya kutsha ngumlilo, Ngokuba ligorha iNkosi uThixo, lowo uyigwebayo.
Ookumkani bomhlaba, abo bahenyuza nayo, baxhamla iziyolo nayo, baya kuyililela, Bayimbambazelele, bakuwubona umsi wokutsha kwayo;
Bemi kude, ngenxa yokoyika intuthumbo yayo, Besithi, Yeha,yeha, mzi mkhulu Bhabheli, mzi unamandla! Ngokuba kufike ngaxa linye ukugwetywa kwakho.
Nabarhwebi bomhlaba baya kulila, benze isijwili ngenxa yayo, Ngokuba ingasathengwa bani impahla yabo yomkhombe:
Impahla yegolide, neyesilivere, neyelitye elinqabileyo,neyeeperile, Neyelinen ecikizekileyo, neyeengubo ezibomvu,neyesilika, neyeengubo ezimfusa, Nomthi wonke ongumsedare,Nezitya zonke zeempondo zeendlovu, Nezitya zonke zomthi onqabileyo kakhulu, Nezobhedu, nezentsimbi, nezemarmore,
Nesinamon, neziqhumiso, namafutha aqholiweyo, nentlaka emhlophe, Newayini, neoli, nomgubo ocoliweyo, nengqolowa,Namaqegu, nezimvu, namahashe, neenqwelo, Nemizimba nemiphefumlo yabantu.
Neziqhamo ezikhanukwa ngumphefumlo wakho zimkile kuwe,Nazo zonke izinto ezityebileyo neziqaqambileyo zimkile kuwe;Akusayi kuba sazifumana zona.
Abarhwebi bezo zinto, abo batyeba ngayo, Baya kuma kude,ngenxa yokoyika intuthumbo yayo,
Belila, besenza isijwili, besithi, Yeha, yeha, mzi mkhulu Owawuthiwe wambu ngelinen ecikizekileyo, nengubo ebomvu,nengubo emfusa, Uhonjiswe ngegolide, namatye anqabileyo,neeperile! Ngokuba buphanziswe ngalixa linye ubutyebi obungaka.
Bema kude, bamana bedanduluka, bakuwubona umsi wokutsha kwayo, Besithi, Nguwuphi na ofana nalo mzi mkhulu?
Bagalela uthuli entloko, Bamana bedanduluka, belila,besenza isijwili, Besithi, Yeha, yeha, mzimkhulu, Apho baba nobutyebi khona bonke aba baneenqanawa elwandle, ngeento ezinqabileyo zawo! Ngokuba ngalixa linye uphanzisiwe.
Wenzele imihlali, nina mazulu, Nani bapostile bangcwele,nani baprofeti; Ngokuba uThixo eniphindezelele kuwo.
Saza isithunywa esithile esinamandla safunqula ilitye,langa lilitye lokusila, ukuba likhulu kwalo; saliphosa elwandle, sisithi: Iya kwenjiwa nje ke ukugadlelwa kwayo iBhabheli, umzi omkhulu, ingabi saba safunyanwa.
Isandi sababethi beehadi, neseemvumi, nesabagwali,nesabavutheli-maxilongo, asisayi kuba saviwa kuwe; Neengcibi zonke zobungcibi bonke azisayi kuba safunyanwa kuwe; Nesandi selitye lokusila asisayi kuba saviwa kuwe;
Nokukhanya kwesibane akusayi kuba sakhanya kuwe; Nezwi lomyeni nelomtshakazi alisayi kuba saviwa kuwe; Ngokuba abarhwebi bakho bebengamanene omhlaba; Ngokuba zonke iintlanga zalahlekiswa kukukhafula kwakho.
Kuwo kwafunyanwa igazi labaprofeti, nelabangcwele, Nelabo bonke abasikiweyo emhlabeni.